जहाँ नेपाली नोट चल्न थाल्यो… |
जहाँ नेपाली नोट चल्न थाल्यो…
Wednesday, July 10, 2019 । काठमाडाैं
नरैनापुर गाउँपालिका ४ को वडा कार्यालयको ढोकैमा मोहम्मद असफाकको काठको घुम्ती पसलमा फोटोकपी पसल छ । सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने प्रिन्टरबाट गरिने एक प्रति फोटोकपीको दररेट छ, ‘पाँच रुपैयाँ ।’ भन्छन्, ‘रेट पाँच आइसी हो। नेपाली आठ रुपैयाँ दिए पनि चल्छ।’वडा कार्यालयका सेवाग्राही उनका ग्राहक हुन् । उनीहरू अधिकांश भारुमै कारोबार गर्छन् । छेवैको चिया पसल, बिरयानी सेन्टर होस् वा पान पसल, कारोबार भारुमै हुन्छ ।
नरैनापुरमा नेपाली नोट चल्न थालेको धेरै भएको छैन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अलि बढी प्रयोगमा आयो । ०७४ सालमा गाउँमै बैंक खुलेपछि धेरैलाई हाम्रो नोट नेपाली भन्ने थाहा भयो । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले पनि धेरैलाई पहिलोपटक नेपाली रुपैयाँ बोक्ने बानी बसाएको छ ।
गाउँमा नेपाली नोट कारोबार हुन थालेपछि बल्ल उनीहरूलाई आफू नेपाली भएको महसुस भएको छ ।
‘सुरुसुरुमा स्थानीयले बैंकलाई पत्याएनन् । विदेशबाट पैसा पठाउनेले एक हजार र पन्ध्र सय पठाएर चेक गर्थे’, शाखा प्रबन्धक खड्गप्रसाद देवकोटा भन्छन््, ‘अहिले त तीन लाख रुपैयाँसम्म पनि आउँछ । खाता खोलेका छन् । पैसा खातामै जम्मा हुन्छ । दैनिक २० देखि २५ वटा रेमिट्यान्सकै कारोबार हुन्छ ।’ बैंकले नेपाली नोट चलाउन सिकाएको छ । ‘डिपोजिट गर्न आउने धेरैले भारु ल्याउँथे । बैंकबाट नेपाली निकाल्दा भारु खोज्थे’, देवकोटाले भने, ‘ बैंकले नै उनीहरूलाई नेरुमा सहज बनाइदियो। अहिले त नेपाली सहजै रूपमा लिएर जान्छन् ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
हतारमा थिएनन् सी, पटक पटक हात उठाउँदै बाईबाई गरिरहे
१. प्रथम शैलुङ कप उद्घाटन, आयोजक ए क्वाटरफाइनलमा
२. जिरी स्वर्गको टुक्रा होः मन्त्री भट्टराई
३. हिलेमा बुद्धपार्क निर्माण
४. मेरो जन्मस्थान नेपाल होः भुटानका राजा जिग्मे
५. पुनःनिर्माणको दोस्रो किस्ता लिन प्राधिकरणको आह्वान
६. दुई दिन भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै